Snapdragon 665, 730 na 730G: Ndị na-arụ ọrụ Qualcomm Mid-Range | Gam akporosis
Snapdragon 665, 730 na 730G: Ndị nhazi ọhụụ ọhụrụ
Qualcomm anọwo na-agbanwe usoro nhazi ya n'ime ọnwa ole na ole gara aga. N'ihi nke a, anyị ahụla ụfọdụ ndị ọhụrụ na-abata n'ahịa ahụ, dị ka Snapdragon 712. Amamịghe America, onye na-achị akụkụ a na gam akporo, na-ahapụ anyị ugbu a na ndị nrụpụta ọhụrụ ya maka etiti etiti na gam akporo. Ọ bụ maka Snapdragon 665, 730 na 730G, nke a na-akpọ ka ha nye ọtụtụ agha.
Ha bu ndi nhazi ihe na ha na-eme ugbu a nke Qualcomm. Ya mere, ha na-abawanye nhọrọ dị n'etiti etiti na gam akporo. Ọ bụ ezie na anyị nwekwara nhazi pụrụ iche. Ebe ọ bụ na Snapdragon 730G bụ nke mbụ ụdịrị emebere maka egwu egwu.
Dị ka anyị na-ahụ mgbe niile na ndị nhazi ọrụ ahụ, ọgụgụ isi na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ha. Ọ dị mkpa na Snapdragon 665, 730 na 730G a. N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara onye nhazi ndị a n'otu n'otu. Iji hụ ihe Qualcomm nwere na-echere anyị na nke a.
Gịnị bụ igwe ịmụ ihe na gịnị ka ọ bụ?
3 Ihe nhazi Snapdragon 730G
Ihe nhazi a bu onye ozo nke Snapdragon 660, dị ka Qualcomm kwuru. N'okwu a, anyị na-ahụ ọgbọ nke atọ nke ikike ọgụgụ isi. Ya mere, ọsọ maka ụdị ọrụ a dị okpukpu abụọ, ma e jiri ya tụnyere ihe nhazi mbụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ewebatala eserese ọhụụ na ya, nke bụ Adreno 610. Na nke a, anyị nwekwara usoro DSP ọhụrụ, nke bụ Hexagon 686 n'oge a.
N'ụzọ dị otú a, smartphones na-eji Snapdragon 685 ga-enwe ojiji ka mma nke AI na foto, imeghe 3D ihu, jiri igwefoto mara ederede, wdg. Ọ bụ ezie na iji ọrụ ndị a dabere na ndị nrụpụta ọ bụla. Obi abụọ adịghị ya, ọhụụ ọhụrụ Qualcomm akpọrọ ka ọ chịkwaa etiti etiti na gam akporo. Maka ugbu a anyị amaghị ekwentị ndị ga-agbago ya.
Onye nhazi aha ya iji dochie Snapragon 710, ihe ndị ahụ dị mkpa na nhazi dị oke ọnụ na gam akporo. N'ezie, ụnyaahụ anyi ka huru ya na OPPO Reno. Ya mere, ihe nhazi ọhụrụ a Qualcomm nwere ọrụ dị mgbagwoju anya n’ihu ya. Mana ọ na-abịa na ọtụtụ ndozi, nke iji merie ndị na-emepụta ihe na gam akporo.
Ọ bụ ihe nhazi nke arụpụtara na 8 nanometers. Dị ka ọ dị na nso a, ọgụgụ isi bụ isi. Na nke a, a na-arụ ọrụ igwe ọgụgụ isi nke ọgbọ anọ. Ọ dị ike karịa nke a hụrụ na Snapdragon 665. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndozi dị mkpa na ya, dịka Qualcomm gosipụtara n'onwe ya.
N'ihi ihe nhazi a, anyị nwere 35% karịa arụmọrụ CPU. Na mgbakwunye na arụmọrụ 25% dị elu na eserese. Ọ ga-ekwe omume igwu na ọnọdụ HDR ekele ya. 4K HDR vidiyo ndekọ, na ọnọdụ eserese, akwadolarịrị na ekwentị ndị na-ewebata ọrụ a. A na-ewebata nkwado maka igwefoto MPN 48, nke na-enweta ọtụtụ ọnụnọ na gam akporo. Na mgbakwunye, anyị nwere nnabata miri emi yana oriri ugboro 4 dị ala karịa Snapdragon 710.
Snapdragon 855 bụzi gọọmentị: Ihe nhazi ọhụụ maka njedebe dị elu
Ugbu a anyị amaghị nke gam akporo ekwentị ga-etinye ya. Ọ bụ ezie na a na-akpọ ya ka ọ bụrụ isi nke Qualcomm na etiti kachasị elu. Yabụ na ọ ga - abụ nhọrọ kachasị ewu ewu n'etiti ụdị. Mana anyi aghaghi ichere imata onye jiri ya.
Ihe nhazi Snapdragon 730G
Anyị na-ejedebe na ihe nwere ike bụrụ ihe na-adọrọ mmasị nke nhazi nke usoro a nke Qualcomm hapụrụ anyị. Ebe ọ bụ na nke mbụ, ụlọ ọrụ malite n'ime egwuregwu egwuregwu n'ụzọ doro anya. Kemgbe afọ gara aga, anyị ga - ahụ etu igwe smartphones na - emepe oghere n’ahịa. Ọ bụ ezie na ha niile dị elu. Na Snapdragon 730G a na-achọ ịkwalite ụdị ekwentị a na ngalaba ndị ọzọ, mana yana arụmọrụ dị ukwuu ọ bụla.
Ọ bụ ihe dịtụ vitaminized nke gara aga processor. N'ime ya, Qualcomm webatara usoro ndozi, nke na-eme ka ọ nwee ike ịrụ ọrụ ka mma mgbe ị na-egwu egwuregwu na ekwentị. N'otu aka ahụ, anyị na-ahụ cores asatọ Kyro 470 n'ime ya, ya na Adreno 618 GPU n'ime, na mgbakwunye na Hexagon 688. DSP Ka e wee nwee ike ịmegharị koodu ọgụgụ isi na ya. A kwadoro nkwenye na RAM asatọ nke LPDDR8 RAM.
Nkwado igwefoto na-ekwe nkwa inwe nnukwu mmasị. N'ihi na Snapdragon 730G a ga-enwe Nkwado maka sensọ ruo 192 MP. Nke a bụ ihe ekwuola ya izu ole na ole gara aga, na ugbu a ọ bụ ke akpatre ukara. Maka ndị ọzọ, anyị na-achọta ihe kachasị dị na WiFi, arụmọrụ na-akwụsi ike karị mgbe ị na-egwu egwu, na ọsọ ọsọ na-ese eserese, maka ahụmịhe ka mma.
O doro anya na ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ igwe ekwentị gam akporo bụ ndị na-agbago Qualcomm processor a. Maka ugbu a, enweghị akụkọ banyere nke a, ma ọ bụ maka mbido ọ ga-ekwe omume na ahịa. Okwesiri ibu n'afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 665, 730 na 730G: Ndị nhazi ọhụụ ọhụrụ
Moto G7 Play na-abata na Spain
Onye isi ụlọ ọrụ OnePlus na-ekwu, ndị na-agbanwe agba dị ka Crystal Gradient adịghị ere nke ọma